Maxaa ka Jira In Puntland aysan dhaafi doonin Tukaraq ? Shuruudo la sheegay Inuu Cabdiwali Gaas ku Xiray dagaalka | KALSHAALE
Maxaa ka Jira In Puntland aysan dhaafi doonin Tukaraq ? Shuruudo la sheegay Inuu Cabdiwali Gaas ku Xiray dagaalka
Laascanod (Kalshaale) Madaxwaynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa mar kale ku celiyay in Puntland ay mas’uuliyad ka saran tahay maamulida deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool.
Cabdiweli Gaas, waxa uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan Somaliland micnuhu uusan ka turjumeynin inay diidan yihiin nabadda, waxa uuna cadeeyay in Puntland ay waligeeda ka shaqeyn jirtay sida ay nabad ugu wada noolaan
Gaas, ayaa ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha Somalia Michael Keating oo ay kuwada hadleen qadka Teleefanka u sheegay in Puntland aysan diyaar u aheyn dagaal dhiig ku daata.
Si kastaba ha ahaatee, maamulka Somaliland ayaa dhankiisa kala imaaday shuruudo adag